Nailiky ny FJKM ry Ratovohery Eddy (Zoky Eddy) | Hevitra MPANOHARIANA
Matetika dia sarotiny tokoa ny denomination tsirairay amin' ny fankatoavan' ny mpikambana an'ireo fotokevitra izay tsy maintsy inoana.
Noho izany, sarotra ho azy ireo tokoa ny manafangaro ny heviny amin' ny hevitra izay tsy mitovy amin' ny azy. (Ny fivavahana moa tsinona dia fanompoana, kabary tsy valiana)
Raha zohiana ny tantara, dia hita fa efa maro tokoa ny zava-nitranga toy izany.
Anisan'ny mpitondra hevi-baovao toy izany moa i Lotera (Luther), i Calvin, ...sns...sns...izay mety efa fantatsika ihany...
Nampidirin'i lehilahytsresy @ 04:33, 2008-08-04 [Valio]
Raha mitondra hevitra vaovao izay mivoana amin'ny fisainan'ny FJKM i Zoky Eddy dia mety ho izay tokoa izany.
Fa raha sendra resaka politika indray no tafiditra ao dia tena tsy rariny.
Nampidirin'i Hery @ 07:54, 2008-08-04 [Valio]
raha misy afaka manamarina ny tsaho heniko - toy izao ilay tsaho : nisy "zavatra" izay eritreretin'ny fjkm hono hoe "masina" (tsy azo itsahina-tsy azo hipetrahana), nefa nolazain-drangahy Eddy fa tsy tokony ho hajaina amin'ny maha "zavatra" azy fa ny hevitra fonosiny no tokony ho hajaina - dia nipetrahany (na koa notsahiny) hono ilay "zavatra"...marina ve izany seho izany?
Nampidirin'i finoanaray @ 07:56, 2008-08-04 [Valio]
ny tsaho henoko mba disoy na hamarino - misy "zavatra" izay eritreretin'ny fjkm fa masina hono ka tsy tokony hipetrahana na hitsahina - dia hoy hono razoky hoe tsy ilay "zavatra" no tokony ho toavina fa ilay hevitra ao amin'ilay "zavatra" - dia nopetrahany (na notsahiny mihitsy aza)hono ilay "zavatra"
Nampidirin'i finoanaranoray @ 08:00, 2008-08-04 [Valio]
Sihon-dresaka no henoko fa toa oe sekta hono ity zoky Eddy ity ankehitriny e! toy izany koa i Mr Romain, izay moa no hisokajin'ireo mpanenjika azy fa izao dia mampita resaka fotsiny fa tsy oe momba ny atsy aho na iroa tsy anjarako izay! Ny olona no aoka hitsara sy hamakafaka dia samy mandray izay tandrifiny. Ny anay manokana zao dia mbola tantara mitohy ihany ity fahafahana manao ordinasiona eveka Vehivavy sy ny resaka Homosexuel. Ary rava maina ny fivorina tany Lambeth tany Londre! Akamatatra kely inona ary ny fiangonana misy ahy ô? Ity misy indice kely Mambra feno ao @ FFKM izy! LOL
Nampidirin'i news2dago @ 08:06, 2008-08-04 [Valio]
Hoy ny teny hoe : "ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit ds la faiblesse, je me glorifierais donc bien plus volontiers de mes faiblesse afin que la puissance de Christ repose sur moi" (1 Cor 12 : 9). Tsy tokony atao hahakivy izany ary tsy ilaina valiny fa efa voasoratra daholo ny fanenjehana ny kristianina. I Eddy koa no nampijoro ahy t@ finona raha tao anaty fahalemena tanteraka aho. Fa tsy olana izany e, mahereza hatrany ry Jentilisa. Tohizo ny asa izay nomen'i Tompo anao. Ianao ve manana page perso @ topc ?
Nampidirin'i Kdaombaramita @ 08:53, 2008-08-04 [Valio]
Aza fady Kdaombramita raha tsy tafiditra mihitsyny soratrao. tsy avy aty amikoiny fa indrindra manondrana tahaka izany ihany ity vavahadin-tseraserantsika ity.
Nampidirin'i jentilisa @ 10:07, 2008-08-04 [Valio]
Raha ny faminavinàko manokana dia mety ho nisy tsy fitoviam-pomba fijery (toa an'io nolazain'i finoanaranoiray) io angamba.
Resaka fombafomba ihany io amiko fa tsy midìka ho dia tena "ady" na fifandrafìna goavana akory. Ny zava-dehibe dia samy mino an'Atra iray izy roa tonta. Koa raha ny hevitro dia tsy tokony hanakatra zava-dalina foana isika fa sao dia vao mainka hampiely tsaho (resa-pôlitika, sns).
Amin-draTokinao moa dia tsy misy fiangonana marina na dia iray aza ; fa izay maharesy lahatra, mahasambatra ny olona iray, ary mizara fahasambarana ho an'ny manodidina azy, no marina aminy. Ka tsy tokony hifampitsara.
Sakamalaho sy havozo hoy ny fitenenana
Nampidirin'i Tokinao @ 12:35, 2008-08-04 [Valio]
Izy aloha dia vantam-piteny ka mety nisy voatsindrona am-bavafo angamba tany ho any ...
asa fa fahazaran'i Zoky Eddy ny miteny hoe: Izay ny ahy ny teniko fa izy koa tsy mety aminao ampodio aminakahy!
Ka nampodiany hatramin-dRazoky izany!
Nampidirin'i Lalasoa @ 22:03, 2008-08-04 [Valio]
Araka ny tatitra henoko dia nisy taratasy izay navoakan'ny foibe FJKM tsy mamela ny fiangonana FJKM rehetra hanaovan'ny Zoky Eddy famelabelaran-kevitra intsony. Izaho manokana sy ho an'izay miangona ao @ FJKM Ambohipo dia isaky ny 2 taona no manao an'io fampianarana io ao @ FJKM Zoara-Fanantenana Ambohipo i Zoky Eddy, tokony ho amin'ny fiandohan'ny taona 2009 no anaovany izany saingy efa nilaza ny Mpitandrina Rakotobe Rajaomanjato fa tsy asiana ady hevitra ny taratasy avy @ foibe FJKM fa dia ajanona ny fampianarana.(Tao anatin'ny alahelo raha ny fijery an'ny pasitera t@ izay fotoana izay.)
Ho an'izay efa nanaraka ny fampianarana dia misy ny tia ary misy ny tsy tia, toy ny mangahazo mangidy malemy io, ka hanina @ halemem-panahiny, ny mampalahelo dia misy mihitsy ny olona izay sahy nijoro vavolombelona araka ny voalaza fa nisoloky olona i Zoky Eddy no nahazoany ny fiara izay ampiasainy raha tsy diso aho dia Peugeot 505 familiale io fiara io.
Ny hevitro manokana dia tena tafiditry ny Pôlitika ny FJKM ankehitriny, izaho rahateo protestanta FJKM, ka izay olona mitady hanelingelina sy sahy milaza ny marina ka manohintohina ny fitondrana ankehitriny dia atao toy izao nahazo an'i zoky Eddy izao avokoa.
Nampidirin'i naritsimba @ 14:10, 2008-09-26 [Valio]
Miala tsiny amin'ireo rahalahy Pastera aho fa izaho koa mitovy amin'i Zoky Eddy: amiko ny Baiboly rehefa tsy mitondra fiainana ho anao dia zavatra sahala amin'ny zavatra rehetra ihany, ka na ipetrahako na .... dia tsy maninona izany. Zoky Eddy koa no nanova ahy fony izaho mbola tsy Mpitandrina, ary efa imbetsaka aho no nanaraka seminera sady tonga any aminay iska roa taona izy ary tena hitako fa manova fiainana maro tokoa. Koa inona mo no tanjona amin'ny fitoriana Filazantsara raha tsy ny hambabo olona maro ho an'ny Tompo?
anjaranareo ny mieritreritra ny fomba andresendahatra ny olona hanaraka sy handray an'i Jesoa ho Tompo sy Mpamonjin'ny fiainany manokana.
Nampidirin'i Lekely @ 16:45, 2010-10-15 [Valio]
Miala tsiny tompoko, fa tena toetra ratsy ato @ FJKM ity mandrarandrara ity. Raha vao hita fa mahasarika olona maro ilay fampianarana, fitoriana dia lazaina fa secte ka tsy azo ampidirina ampiangonana intsony. Efa fantasika rehetra ny momba an'Andravoangy Fivavahana e!.Misy fiangonana iray koa teny mavitrika @ fitoriana filazantsara ka mahasarika tanora maro, ary tena resy lahatra ny @ Jesoa Kristy eto andrenivohitra. Maniry aho mba ho toa io daholo ny fjkm rehetran aza hitako????.
Tsy fombafomba ny fivavahana re olona e!, ka rehefa manakiana ny hita fa tsy mety ve dia ailika,ary lazaina fa fivavahana diso na fampianaran-diso. Mila miverina mianatra an!
Nampidirin'i sahivonona @ 13:58, 2012-07-13 [Valio]
Miarahaba tompoko, anisan'ny manaraka ny seminera vonjeo ny fianakaviana ny tenako amizao ary ao anatin'ny fampianarana izany indrindra no ahalalako fa ny olona tsy mahazaka ny marina, zatra mandeha amin'ny maizina fa tsy misy intsony ny fahazavana fa takonana amin'ny fomba rehetra.
Nampidirin'i Solo @ 07:26, 2012-07-25 [Valio]
Jesoa no Tompo! Izay tsy manohitra fa Izy no Tompo dia momba... Ka na fiangonana io na fikambanana io na asa? Dia any an-danitra ihany no tanjona iombonana fa ny "lalana" no samihafa. Ny lalana resahako eto dia ny karazam-piangonana sns ... fa raha ny tena marina dia iray ihany no lalana dia i Jesoa Kristy irery ihany.
Nampidirin'i Haja @ 18:15, 2012-08-24 [Valio]
Baiboly io zavatra lazainao io. Ny tiany ambara dia hoe tsy ny fanajàna azy ivelany no tena zava-dehibe fa ny fankatoavana sy ny fanekena ary ny fandraisana ny votoatin'ny Baiboly ho marina ka hoarahina eo @ fiainana .Tsy mety @ FJKM zay foto pisainana izay.
Nampidirin'i piso @ 09:17, 2012-12-07 [Valio]
Amiko ndray de izao: Boky toy ny boky rehetra ny Baiboly rehefa tsy iainana ny ao anatiny. Ka izay tianao izany na ny anatiny no iainana na ny ivelany. Ny an'ny sasany manko ny ivelany. Mirary ny Fiadanan'ny Tompo aminareo rehetra.
Nampidirin'i Pasteur KOERA @ 08:14, 2013-01-19 [Valio]
Resak tsy mahasoa no tsy mampandroso izany, matoa ny FJKM nanao izany fanambarana izany dia efa nisy ny fanadihadihana sy fandinihina lalina.Misaotra Tompoko
Nampidirin'i Toky007 @ 06:35, 2013-02-13 [Valio]
Nanaraka ny seminera nataon'i Zoky eddy tamin'ny televiziona ny tenako, ary nahita ny marina no nolazainy ary mivantana, ka izay no tsy zakan'ny sasany. Tsara tokoa amiko io seminera io ary raha mbola mitohy dia mampahery azy...
Nampidirin'i Sylviana Rabenasolo @ 07:00, 2013-08-24 [Valio]
Tsy maninona zany eh!na mahazo mampianatra ao @ fjkm na tsy mahazo,tsy mampaninona 'zany.Na mahazo sitraka na tsy mahazo sitraka,mifaly mandrakariva noho ny @ tompo.Fampianarany Zoky Eddy io.Efa nanao betsaka tamin'io fiangonana io koa ianao ka aleo mba ho any hafa indray.Tena mankasitraka Zoky Eddy ah!Tena nandray fiainana be dia be taminao izahay.Tena tsarovanay ato amponay mandrakariva ianao,eny na dia tsy hitany masonao aza izahay,dia mivavaka ho anao mandrakariva.Ny tompo anie hombanao Zoky ah!.
Nampidirin'i Gerard Rakotomalala @ 12:41, 2016-08-21 [Valio]